Tommy's Love Stories: First Love - Chapter 4
“ရောက်ပြီ~~” စိုးယု ပြောတော့
ယွန်းက တအံ့တသြနှင့် “နင် ငါ့အိမ်ကို ဘယ်လိုသိလဲ..”
“Come on~~ ငါ့အိမ်ရောက်တာကိုပြောတာ…” စိုးယု မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ပြောလိုက်သည်။
“အိုး… ငါလဲ ဒီမှာနေတာ စိုးယုရဲ့..”
စိုးယုတစ်ယောက် အံ့သြချင်ယောင်ဆောင်ပြီး… “ဟယ်….တကယ်.. ငါနေတာ ၆ထပ်မှာ..”
“နင် ငါ့ကိုနောက်နေတာ မဟုတ်ပါဘူးနော်… “ ယွန်းက မသင်္ကာစွာမေးသည်.. ပြီးမှ “ငါလဲ ၆ထပ်မှာနေတာ..”
“ဟုတ်လား… ငါက အခန်း ၆၀၂ မှာနေတယ်..”
“သြော်..အရင်အပတ်က အိမ်ပြောင်းလာတာ နင်တို.မိသားစုပေါ့… ငါ့အခန်းက ၆၀၄.. နင်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဘဲ..” ယွန်းက ၀မ်းသာစွာပြောသည်..
စိုးယုက ခေါင်းငြိမ့်ရင်း… “အိမ်ပြောင်းလာတာတော့ ဟုတ်တယ်… မိသားစုမဟုတ်ဘူးယွန်းရဲ့ ငါတစ်ယောက်တည်းနေတာ..”
ယွန်း မျက်လုံးဝိုင်းလေးနဲ့ စိုးယုကို တအံ့တသြကြည့်နေတုန်း…
“လာ..ဓာတ်လှေကားရောက်ပြီ ..သွားကြစို.” စိုးယုက ယွန်းကိုဆွဲပြီး ခေါ်လာခဲ့သည်..
စိုးယုက ယွန်းကိုဖက်ပြီး ..”မနက်ဖန်ကြမှ တွေ.ကြမယ် သူငယ်ချင်းလေး…See you..”
ယွန်းလဲ ရုတ်တရက် ကြောင်တောင်တောင်နှင့် ပြန်ဖက်လိုက်ပြီး.. “အင်း..တာ့တာ”
ယွန်း အိမ်တံခါးဖွင့်ပေးရန် တံခါးခေါက်နေတုန်း…. မျက်နှာချင်းဆိုင်အခန်းသို. စိုးယု သော့ဖွင့်ကာ ၀င်သွားသည်ကို လည်ပြန်လှည့်ကြည့်မိသည်…
“ပြန်လာပြီလား…” ထုံးစံအတိုင်း မေမေ့ရဲ့ ခပ်အေးအေးနှုတ်ဆက်သံကို ကြားရသည်။
“ဒီနေ့ ပြန်လာတာ စောလှချည်လား… ကျောင်းမသွားဘူးလား..” မယုံသင်္ကာနှင့် ဖေဖေကမေးတော့..
“မဟုတ်ပါဘူး.. သူငယ်ချင်း ကားနဲ့ ပြန်လာလို.ပါ.. သူက မျက်နှာချင်းဆိုင် အခန်းမှာနေတာ” ဟု ယွန်းခေါင်းကိုငုံ.ရင်း ဖေဖေ့ကို ကြောက်ရွံ.စွာ ပြန်ဖြေမိသည်..
“မျက်နှာချင်းဆိုင် အခန်း~~~ ~” ဖေဖေက ယွန်းပြောသည်ကို မရှင်းသလို ရေရွတ်နေတော့
“ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေ… သူက ဒီနေ့မှ ယွန်းတို.ကျောင်းကို ပြောင်းလာတဲ့ ကျောင်းသူသစ်ပါ.. သူက ယွန်းတို.အခန်းနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာနေတယ်..”
ဖေဖေက ခေါင်းကိုငြိမ့်ရင်း… “ကောင်းပြီ… သဘောပေါက်ပြီ.. သွား.. ရေချိုးပြီးရင် ညစာစားဖို.ထွက်လာခဲ့…”
ဖေဖေ့အမိန့်ရသည်နှင့် လေးမှလွှတ်လိုက်သော မြှားတစ်စင်းလို၊ အိပ်ခန်းဆီသို. အမြန်ဆုံးထွက်လာခဲ့သည်…
ယွန်းက ဖေဖေ့ကို အရမ်းကြောက်ရသည်… ဖေဖေက မေမေ့ကို အရမ်းချစ်သလောက် ယွန်းကိုဆိုလျှင် တစ်ချက်မှ မျက်နှာသာမပေး… မေမေနဲ့ ပြသနာဖြစ်တိုင်း ယွန်းကို ရိုက်တတ်သည်… ဖေဖေ့ရှေ.မှာဆိုလျှင် ဘယ်တော့မှ အမှားမလုပ်ရဲ… ဖေဖေကလဲ ယွန်းကိုတွေ.လျှင် ပြသနာရှာဖို.စောင့်နေတတ်သည်ဟု ထင်မိသည်..
ရေချိုးရင်း စိုးယုအကြောင်းတွေးနေမိသည်… စိုးယုက အရမ်းချစ်ဖို.ကောင်းပြီး.. သူမရဲ့ ဆံပင်ရွှေရောင်တွေက ဖြူဝင်းသောအသားအရည်နှင့်လိုက်ဖက်လွန်းသည်။ Major Queen ယွန်းတောင်မှ စိုးယုနှင့်ယှဉ်လျှင် အရောင်မှိန်သွားသလိုခံစားရသည်.. သို.ပေမယ့် စိုးယုအပေါ် မနာလိုမဖြစ်မိဘဲ ပိုလို.တောင် သဘောကျမိသေးသည်…
စိုးယု သူမကို ဖက်ပြီးနှုတ်ဆက်တော့ ရင်တွေတောင် ဘာမှန်းမသိခုန်သွားသေးသည်… ပြီးမှ ကိုယ့်ဘာသာ သဘောကျပြီး ရီဖြစ်သည်… ငါတော်တော်ကြောင်တာဘဲ… မိန်းကလေးအချင်းချင်းသူက ခင်လို.ဖက်ပြီး နှုတ်ဆက်တာဘဲ…..
ရုတ်တရက် စဉ်းစားမိသည်က… စိုးယုကို သူမတစ်နေရာရာမှာ မြင်ဖူးသလိုလို…..
“ယွန်း… ရေချိုးတာကြာလှချည်လား…” မေမေက ရေချိုးခန်းတံခါးလာခေါက်မှ ယွန်းအတွေးထဲမြောနေတာ သတိရသည်…
“ပြီးပြီ မေမေ… ခုထွက်လာပြီ..” မေမေ့ကို ပြန်အော်ရင်း ရေချိုးခြင်းကို မြန်မြန်လက်စသပ်လိုက်ရသည်။ မဟုတ်ရင် ဖေဖေဒေါသအိုးကြီး ညစာလာစားတာနောက်ကျသည်ဆိုပြီး စိတ်ဆိုးနေမှာ စိုးရသည်လေ….
အ်ိမ်ပြန်ရောက်တော့ ကျောပိုးအိတ်ကို ဧည့်ခန်းက ဆိုဖာပေါ်ပစ်တင်ရင်း… Laptop ကိုဖွင့်ရင်း email ထိုင်စစ်သည်…
ဖေဖေနဲ့ မေမေဆီက email တွေဝင်ထားသည်.. စိုးယုကိုလွမ်းနေကြောင်း.. ၂ယောက်လုံး နေကောင်းကြကြောင်းတွေပါဘဲ.. email တွေဖတ်ရင်း မိသားစု၃ယောက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခဲ့သော အချိန်တွေကို လွမ်းမိသည်… ဖေဖေနဲ့ မေမေရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သမီးလေးအနေနှင့် ရှိသမျှ အချစ်တွေကို ပုံအောပြီးရခဲ့သော စိုးယုအဖို. ..အခုတော့ အိမ်ခန်းကျယ်ထဲမှာ တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်နေလေပြီ…
အတွေးများမှ ခေါင်းကိုခါယမ်းရင်း ကိုယ်ရွေးချယ်ခဲ့သော လမ်းကို ဆုံးအောင်ဆက်လျောက်ရမှာဘဲဟု အားတင်းရင်း.. ရေချိုးဖို. ထထွက်လာခဲ့သည်…
ရေချိုး၊ ညစာစားပြီးတော့ ညနေတော်တော်စောင်းနေခဲ့ပြီ….
ကော်ဖီခွက်ကို ကိုင်ရင်း ၀ရံတာမှာ ဟိုငေးဒီငေးလုပ်ကာ ယွန်းအကြောင်းကို တွေးနေခဲ့မိသည်…
စိတ်တွေကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ဟိုရောက် ဒီရောက်…
“၀ုန်း.. ဒိုင်း…. “ တစ်ဖက်ခန်းမှ တံခါးခပ်ကျယ်ကျယ် ဖွင့်ပိတ်သံနှင့်အတူ “အီး..ဟီး..” ငိုသံတွေ…
စိုးယုဝရံတာမှ အိမ်ထဲပြန်ဝင်ပြီး တံခါးရှိရာသို. ခပ်သွက်သွက်လျောက်ကာ အသံတွေကို နားစွင့်မိသည်…
“အဟင့်~~ ဟင့်.” ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရှိုက်ငိုသံ~~
အထူးသဖြင့် သူမသိနေတာ.. ဒါ ယွန်းရဲ့ ငိုသံ…
တံခါးကို ချက်ချင်းဖွင့်ရင် အပြင်ဘက် ကော်ရစ်ဒါကို ထွက်ကြည့်မိတော့~~
“ယွန်းရယ်~~” စိုးယုခပ်ညည်းညည်း ရေရွတ်ကာ ကော်ရစ်ဒါထောင့်ချိုးမှာ ထိုင်ရင်း ငိုနေသောကောင်မလေးဆီသို. အပြေးလှမ်းသွားလိုက်သည်…..
‘အိုး… လက်မောင်းမှာလဲ သွေးတွေနှင့်..” စိုးယု စိတ်ပူစွာ ငိုနေသောယွန်းကို ပွေ.ဖက်လိုက်ရင်း…
To be continue~~ J
Posted by Tommy Girl at 6:35 AM